Kukhona lens ezintathu telecentric:
1. Into-side telecentric lens - lens into telecentric kuyinto diaphragm beso afakwe ohlelweni optical yesithombe ohlangothini indiza ebalulekile, lapho diaphragm beso ubekwe indiza isithombe indiza ebalulekile, ngisho noma izinguquko into ibanga, like I ibanga futhi washintsha, kodwa ukuphakama awushintshanga, okusho usayizi into kulinganiswa akuzange kuyishintshe. lens Telecentric ezimbonini ngokunemba nesilinganiso, ukuhlanekezela incane. High-ukusebenza ongafinyelela akukho ukuhlanekezela.
2. Njenge-lens telecentric - njengenombolo lens telecentric, ngokubheja i stop beso indiza ebalulekile into ukuze isikwele oyinhloko yesithombe parallel eksisi optical ukuze nakuba kukhona ushintsho isikhundla ukukhweza chip be-CCD, kowezi usayizi wesithombe ayiguquki.
Inzuzo lens telecentric wukuthi chip ikhamera uthola ukukhanya iyunifomu, njengoba parallel ukukhanya kuphela eksisi optical kungaba ngesenzakalo micro-lens phambi be-CCD / CMOS chip. Ngakho ukuthi isithombe ngeke sibonakale ukubopha.
3. Telecentric lens nhlangothi zombili - Lokhu lens ihlanganisa izinzuzo kokubili lens ngenhla.
Ngo zezimboni processing image / umshini umbono, ngokuvamile kuphela ukusebenzisa lens into telecentric! Ngezikhathi ezithile kukhona lens telecentric nhlangothi zombili (Yiqiniso, intengo ephakeme). Emkhakheni wezingalo zezimboni processing image / umshini umbono, amalensi telecentric ungalilahli ngokuvamile ukusebenza, ngakho umkhakha akanayo ukuyisebenzisa.